Thursday, 09 December 2010 09:26	नागरिक
झरना बज्राचार्य—मेरा धेरै साथी अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए। अहिले उतै घर किनेर बसेका छन्। पढाइ राम्रो भएकाहरू यतै काठमाडौंमा छानेका जीवनसाथीसँग सेटल भएका छन्। अनि आफ्नो क्षेत्रमा अग्रणी व्यावसायिक परिचय बनाएर समाजमा सानको जीवन बाँचिरहेछन्। अरूले कसरी लिन्छन्, थाहा छैन। मलाई लाग्छ, अध्ययनले मान्छेको जीवन बदल्छ। संसार फेर्छ।
मनीषाले भनिन्- व्यक्तिगत प्रश्न नसोध्नू
Wednesday, 08 December 2010 10:59	नागरिक
स्मृति ढुंगाना, काठमाडौं, मंसिर २२- आफ्नो पछिल्लो नेपाली फिल्म 'धर्मा'को प्रवर्द्धनमा जुटेकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनी निकै खुलिन्।
'मेरो व्यक्तिगत विषयमा जिज्ञासा नराख्नु होला,' सम्भावित प्रश्नलाई निषेध गर्दै उनले भनिन्, 'सुटिङमा आफ्नै नेपाली भाषा बोल्न पाएँ। यो नै रमाइलो अनुभव थियो।' अन्य कुरामा भने बलिउड र नेपाली फिल्मको सुटिङ खासै अन्तर नदेखेको बताइन् उनले।
छोरा पाउन राष्ट्रपति पत्‍नीको भारतमा भाकल
Tuesday, 07 December 2010 13:53	नागरिक
नयाँ दिल्ली, मंसिर २१ - भारत भ्रमणमा रहेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीकी मोडल पत्‍नी कार्ल ब्रुनीले छोरो पाउँ भन्दै भाकल गरेकी छिन्।
'क्या दामी'पछि 'फाटेको मन'
Tuesday, 07 December 2010 10:47	नागरिक
काठमाडौं, मंसिर २१ (नागरिक) - गायक शिव परियारले संगीत दिएको एल्बम 'फाटेको मन' सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानीको म्युजिक नेपालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा संगीतकर्मी रामशरण दर्नालले एल्बम विमोचन गरेका हुन्।
एल्बम विमोचनपछि दर्नालले शास्त्रीय संगीतको अध्ययन गरेको हुनाले परियारका गीतबाट आशावादी रहेको बताए। 'संगीतमा शास्त्र र सिद्धान्तको वास्ता नगर्ने धेरै छन्। तर, शिव शास्त्रीय संगीतलाई आधार बनाएर आएका गायक हुन्,' दर्नालले भने।
कम्तिमा २१ पटक रोएकी छुः ऋचा
Monday, 06 December 2010 12:46	नागरिक
'फस्ट लभ'बाट हिरोइन बनेकी ऋचा शर्मा अहिले सुदर्शन थापाको 'मेरो लभस्टोरी'मा व्यस्त छिन्। उनले निर्देशक भूषण दाहालको 'हाम्रो टिम' टेलिशृंखला पनि सिध्याएकी छिन्। उनीसँगको कुराकानीः
मान्छेलाई कति पटकसम्म सुधि्रने मौका दिइनुपर्छ?
कम्तीमा पनि एकपटक दिनुपर्छ। एकपटकमा नसुधि्रनेलाई धेरै अवसर दिनु ठिक होइन।
उमेर एउटा विन्दुमा रोकिने भयो भने तपाई कुन उमेरमा रोकिन चाहनुहुन्छ ?
६० वर्षमा रोकिए हुन्छ। त्यसबेला आफ्ना नातिनातिनीको मुख हेर्न पाइन्छ। अहिलेका दिनको स्मरण गर्दा रमाइलो होला।
'ओशो र विवेकानन्दको किताब पढेँ'
Sunday, 05 December 2010 11:23	नागरिक
शिव रेग्मीको 'फूल' फिल्मको सुटिङ सिध्याएकी गरिमा पन्त केही दिनमा 'प्रीतिको फूल' फिल्ममा व्यस्त हुनेछिन्। उनको फुर्सदिलो साता यसरी बित्यो।
राउटेले अस्वीकार गरे कोमल वलीको प्रस्ताव
Saturday, 04 December 2010 19:54	नागरिक
कलेन्द्र सेजुवाल, सुर्खेत, मंसिर १८- पोइल जान पाम... पाम भन्ने गीत गाउन सुर्खेत आइपुगेकी कोमल वलीले राखेको विवाह प्रस्ताव राउटे युवाले अस्वीकार गरिदिएका छन्। 'म तिमीसँग जान्छु लाने हो?' मञ्चमा भेटिएका राउटे युवा प्रकाश शाहीलाई वलीले सोधेकी थिइन्। एकाएक आएको विवाह प्रस्तावले राउटे प्रकाश शाही अलमल्ल परे। तर उनले अविवाहित गायिकाको विवाह प्रस्ताव स्वीकारेनन्। बरु चुपचाप लागेर आफ्ना अरु सहकर्मीसँगै लसुक्क मञ्चबाट बाहिरिए।
३ महिना अमेरिका, ९ महिना नेपाल
Saturday, 04 December 2010 11:38	नागरिक
मनोज अधिकारी/सन्तोष पोखरेल, पोखरा, मंसिर १८ - अमेरिका जानुअघि १४ वर्षपहिले सातवटा फिल्म खेल्दाखेल्दै सरोज खनाल नेपाली फिल्म क्षेत्रबाट एकाएक गायब भए। जल्दाबल्दा हिरो बिदेसिएपछि नेपाली फिल्मी क्षेत्रले डेढ दसक सशक्त अभिनय गर्ने कलाकारको अभाव झेलिरह्यो। अभिनय कलामा सधैं अग्रस्थानमा आउने तिनै सरोज खनाल अहिले नेपाल फर्केका छन् तर सधैंका लागि होइन। तैपनि उनले पुराना र आफूलाई नचिनेका नयाँ पुस्ताका दर्शकलाई एउटा कोसेली दिँदैछन्।
'मनभन्दा लुगा नै न्यानो'
Friday, 03 December 2010 19:44	नागरिक
'हिफाजत'बाट हिट भएका अभिनेता आयुष रिजालको अहिले 'खुशी' फिल्म प्रदर्शन भइरहेको छ। उनीसँग गरिएको ऋतुसंवादः
१. मन पर्ने ऋतु कुन हो?
सबैभन्दा उत्कृष्ट ऋतु शरद नै हो। यसमा न जाडोको चिन्ता हुन्छ न गर्मीको। यो ऋतुमा आत्मीय प्रेमको भाव धेरै हुन्छ। त्यसमाथि हाम्रो महान चाड समेत परेको छ।
२. तपाईंलाई यसपालि जाडोको महसुस कहिलेदेखि भयो?
बिहान सबेरै सुटिङमा धाउनुपर्छ। अस्ति मंसिर १४ देखि अलि धेरै जाडोको महसुस गरेको छु। त्यो दिन त जाडोले गर्दा सुटिङमा समेत अप्ठ्यारो भएको थियो।
'नार्निया' अमेरिकामा रिलिज हुनुअघि नै काठमाडौँमा